Justin Trudeau, 2019
Justin Trudeau (25 Diseembar 1971) waa ra'iisul wasaaraha Kanada. Wuxuu xubin ka yahay xisbiga Liberal. Qiimaynta oggolaanshaha ayaa hoos u dhacay waqtiyadii Justin Pierre James Trudeau PC (/ trʊdoʊ /; Faransiis: [ʒystɛ tʁydo]; wuxuu dhashay soddon diisanbar, 1971) waa siyaasi Kanada ah oo u shaqeeya ra'iisul wasaaraha 23-ka iyo kan hadda Kanada tan iyo sannadkii 2015-ka iyo hoggaamiyaha Xisbiga Liberal Party tan iyo 2013. [ 2]  Trudeau waa ra'iisal wasaaraha labaad ee ugu da'da yar Canada, kadib markii Joe Clark; Waxa kale oo uu yahay kan ugu horreeya ee la xidhiidha qofkii hore ee post, sida wiilka ugu wayn ee Pierre Trudeau.  
Wuxuu ku dhashay Ottawa, Trudeau wuxuu ka soo qaybgalay Collège Jean-de-Brébeuf waxana uu ka qalin jabiyay Jaamacadda McGill ee 1994 iyo Jaamacadda British Columbia ee 1998. Wuxuu heley fariin dadweyne oo aad u sareeya bishii Oktoobar 2000, markii uu geeriyooday aabihiis aabihiis. 6] Kadib markii uu qalinjabiyay, wuxuu macallin ka ahaa Vancouver, British Columbia. Waxa uu dhammaystiray hal sano oo barnaamijka injineernimada ee École Polytechnique, laga bilaabo 2002 ilaa 2003, iyo hal sano oo barnaamijka mastarka ah ee juquraafiyadda deegaanka ee jaamacadda McGill, laga bilaabo 2004 ilaa 2005. Wuxuu u dooday sababo kala duwan, wuxuuna ku sawiray ilmo adeerkiis 2007 Wareegyada TV-ga ee Dagaalka Weyn 
Doorashadii federaalka ee 2008-dii, waxaa loo doortay inuu matalo wadooyinka Papineau ee Golaha Shacabka. Sannadkii 2009, waxa loo magacaabay naqdiga xisbiga Libaraalka ee dhalinyarada iyo dhaqamada kala duwan, sanadka soo socda, wuxuu naqdiyay dhalashada iyo socdaalka. Sannadkii 2011, waxaa loo doortay inuu yahay naqshad waxabarasho dugsi sare ah, cayaaraha dhalinyarada iyo hiwaayadda. Trudeau ayaa ku guuleysatay hoggaanka xisbiga Libaraalka bishii Abriil 2013-kii
Nolosha shakhsiga ah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Trudeau wuxuu guursaday wuxuuna leeyahay 3 caruur ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Justin_Trudeau&oldid=226324"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 Diseembar 2021, marka ee eheed 21:01.